परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु | अंश १६० | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु | अंश १६०
26 जुन 2021
मानिसहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, तिनीहरूलाई शैतानले निल्‍नेछैन भन्‍ने प्रत्याभूति दिनेबाहेक परमेश्‍वरले धेरै कुरा गर्नुहुन्छ। कसैलाई चुनेर मुक्ति दिनुभन्दा पहिले उहाँले प्रशस्त मात्रामा तयारीको काम गर्नुहुन्छ। पहिलो, तँमा कस्तो प्रकारको चरित्र हुनेछ, तँ कस्तो प्रकारको परिवारमा जन्‍मनेछस्, तेरा बाबुआमा को हुनेछन्, तेरा दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरू कति जना हुनेछन्, र तँ जन्‍मने परिवारको अवस्था, आर्थिक अवस्था, र परिस्थितिहरू के-कस्ता हुनेछन् त्यस बारेमा परमेश्‍वरले सावधानीपूर्ण तयारीहरू गर्नुहुन्छ। परमेश्‍वरका चुनिएका बहुसंख्यक मानिसहरू कस्तो परिवारमा जन्‍मन्छन् के तँलाई थाहा छ? के ती प्रतिष्ठित परिवारहरू हुन्? प्रतिष्ठित परिवारहरूमा जन्‍मने कोही पनि छैनन् भनेर हामी निश्‍चित रूपमा भन्‍न सक्दैनौं। केही हुन सक्छन्, तर तिनीहरू अत्यन्तै थोरै छन्। के ती असाधारण सम्पत्ति भएका परिवारहरूमा, अरबपति वा खरबपति परिवारमा जन्‍मेका हुन्छन्? हुँदैनन्, तिनीहरू यस प्रकारका परिवारमा लगभग कहिल्यै जन्‍मेका हुँदैनन्। त्यसो भए, यीमध्ये धेरैजसो मानिसहरूका लागि परमेश्‍वरले कस्तो प्रकारको परिवारको बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ? (साधारण परिवार।) अनि कस्ता परिवारलाई “साधारण परिवार” ठान्‍न सकिन्छ? तिनमा काम गरेर खाने परिवार—अर्थात्, बाँच्नको लागि ज्याला-मजदुरीमा भर पर्ने, आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्‍ने, र बढी सम्‍पन्‍न नभएकाहरू पर्छन्; तिनमा किसान परिवारहरू पनि पर्छन्। किसानहरू आफ्‍नो खानाको लागि अन्‍नपात रोप्छन्, खानको लागि तिनीहरूसँग अन्‍न अनि लाउनको लागि लुगा हुन्छ, र तिनीहरू भोकै बस्‍नु वा कठ्याङ्ग्रिनु पर्दैन। त्यसपछि स-साना व्यापार-व्यवसाय संचालन गर्ने केही परिवारहरू छन्, र बाबुआमा बुद्धिजीवी भएका कतिपय परिवारहरू छन्, र यिनलाई पनि साधारण परिवारको रूपमा गन्ती गर्न सकिन्छ। कार्यालयमा काम गर्ने वा सानातिना पदमा रही सरकारी काम गर्ने केही बाबुआमा पनि छन्, जसलाई पनि प्रतिष्ठित परिवारमा गन्ती गर्न सकिँदैन। धेरैजसो मानिसहरू साधारण परिवारमा जन्‍मन्छन्, र यी सबैको चाँजोपाँजो परमेश्‍वरले नै मिलाउनुभएको हुन्छ। भन्‍नुको अर्थ, सबैभन्दा पहिलो कुरा, तिमीहरू जिउने यो वातावरण मानिसहरूले कल्‍पना गर्नेजस्तो अत्यधिक स्रोत-साधन नभएको परिवार हो, र परमेश्‍वरले तिमीहरूको लागि निर्णय गरिदिनुभएको परिवार यही हो, र बहुसंख्यक मानिसहरू यस प्रकारको पारिवारिक सीमितताहरूमा जिउँछन्। त्यसो भए, सामाजिक हैसियतको बारेचाहिँ के भन्‍ने त? बहुसंख्यक बाबुआमाका आर्थिक अवस्था मध्यम स्तरका छन् र तिनीहरूसँग उच्‍च सामाजिक हैसियत छैन—तिनीहरूको लागि एउटा व्यवसाय हुनु नै राम्रो कुरा हो। के तिनमा गभर्नरहरू पर्छन्? वा राष्ट्रका राष्ट्रपतिहरू पर्छन्? (पर्दैनन्।) बढीमा तिनीहरू स-साना व्यापार-व्यवसायका व्यवस्थापकहरू वा स-साना व्यापार-व्यवसायका मालिकहरू हुन्छन्। तिनीहरूको सामाजिक हैसियत मध्यम स्तरको हुन्छ र तिनीहरूको आर्थिक अवस्था औषत हुन्छ। अर्को तत्व भनेको परिवारको जिउने वातावरण हो। सर्वप्रथम, यी परिवारहरूका बीचमा आफ्‍ना छोराछोरीलाई जोखाना हेर्ने र भविष्य बताउने मार्गमा हिँड्नको लागि स्पष्ट रूपमा प्रभाव पार्ने बाबुआमा हुँदैनन्; यस्ता कुराहरूमा संलग्‍न हुनेहरू एकदमै कम हुन्छन्। धेरैजसो बाबुआमा सामान्य नै हुन्छन्। यसको साथै परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई चुन्‍नुहुन्छ, उहाँले तिनीहरूका लागि यस प्रकारको वातावरण तय गर्नुहुन्छ, जुन मानिसहरूलाई मुक्ति दिने उहाँको कामको लागि अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। झट्ट हेर्दा, परमेश्‍वरले मानिसको लागि विशेष रूपमा पृथ्वी नै हल्‍लाउने किसिमको केही पनि गर्नुभएको छैन जस्तो देखिन्छ; उहाँले आफूले गर्ने सबै कुराहरू नम्रताको साथ र मौनतामा चूपचापसित र गोप्य रूपमा गर्नुहुन्छ। तर वास्तवमा, परमेश्‍वरले गर्नुहुने सबै कार्य तेरो मुक्तिको लागि जग बसाल्‍न, तेरो मुक्तिको लागि अगाडिको बाटो र आवश्यक सबै अवस्थाहरू तयार गर्नको लागि नै गर्नुहुन्छ। त्यसपछि, परमेश्‍वरले हरेक व्यक्तिलाई निश्‍चित समयमा उहाँको अघि ल्याउनुहुन्छ: तैँले परमेश्‍वरको आवाज सुन्‍ने बेला यही हो; तँ उहाँको सामुन्ने आउने बेला यही हो। यस्तो हुँदाको समयसम्‍म, कतिपय मानिसहरू पहिले नै बाबुआमा भइसकेका हुन्छन्, जबकि अरूचाहिँ कसैका छोराछरीका रूपमै हुन्छन्। अर्को शब्‍दमा भन्दा, कतिपय मानिसहरूले विवाह गरेर छोराछोरी जन्‍माइसकेका हुन्छन्, तर अरूचाहिँ अझै पनि अविवाहित हुन्छन्, तिनीहरूले आफ्‍नो परिवार अहिलेसम्‍म सुरु गरेका हुँदैनन्। तर व्यक्तिको अवस्था जे-जस्तो भए पनि, तँलाई कहिले चुनिनेछ र उहाँको सुसमाचार र वचन तकहाँ कहिले पुग्‍नेछ सोबारे परमेश्‍वरले पहिले नै समय तोकिसक्‍नुभएको हुन्छ। तैँले परमेश्‍वरको वचन सुन्‍न सक् भनेर परमेश्‍वरले तकहाँ सुसमाचार ल्याइपुर्‍याउने परिस्‍थितिहरू, निश्‍चित व्यक्ति वा निश्‍चित प्रसंग तय गरिसक्‍नुभएको हुन्छ। परमेश्‍वरले तेरो लागि पहिले नै सम्पूर्ण अत्यावश्‍यक अवस्थाहरूको तयारी गरिसक्‍नुभएको हुन्छ। यसरी, यस्तो भइरहेको छ भन्‍ने मानिसलाई थाहा नभए पनि, मानिस उहाँको सामुन्ने आउँछ र परमेश्‍वरको परिवारमा फर्कन्छ। मानिसले थाहै नभई परमेश्‍वरलाई पछ्याउँछ र उहाँले मानिसको लागि तयार पार्नुभएको परमेश्‍वरको कार्यशैलीको हरेक चरणमा प्रवेश गर्दै उहाँको कार्यको हरेक चरणमा प्रवेश गर्छ। यस बेला मानिसको लागि काम-कुराहरू गर्ने क्रममा परमेश्‍वरले के-कस्ता तरिकाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले, मानिसले प्राप्त गर्ने वास्ता र सुरक्षा नै न्यूनतम कुरा हो। यसबाहेक, परमेश्‍वरले विभिन्‍न मानिसहरू, घटना, र काम-कुराहरू तय गर्नुहुन्छ ताकि ती कुराहरूद्वारा मानिसले उहाँको अस्तित्व र उहाँका कार्यहरू देख्‍न सकून्। उदाहरणको लागि, आफ्‍नो परिवारको कुनै व्यक्ति बिरामी भएकोले कतिपय मानिसहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्। जब अरूले तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्छन्, तिनीहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न सुरु गर्छन्, र उक्त परिस्थितिको कारणले गर्दा परमेश्‍वरमाथिको यो विश्‍वास आउँछ। त्यसो भए, कसले यो परिस्थितिको बन्दोबस्त गर्‍यो त? (परमेश्‍वरले।) यस रोग-बिमारको माध्यमद्वारा, कतिपय परिवारमा हरेक व्यक्ति नै विश्‍वासी बन्छन्, अरू कतिमा चाहिँ परिवारका एक-दुई जना मानिसहरूले मात्रै विश्‍वास गर्छन्। झट्ट हेर्दा, तेरो परिवारको कुनै व्यक्ति बिरामी भयो भन्‍नेजस्तो देखिन्छ, तर यो वास्तवमा तँ परमेश्‍वरकहाँ आउन सक् भनेर तँलाई प्रदान गरिएको परिस्थिति हो—यो परमेश्‍वरको दया हो। कतिपय मानिसहरूका लागि परिवार कठिन हुँदा र तिनीहरूले कुनै शान्ति नपाउँदा, अवसर आफै आउँछ—कसैले सुसमाचार सुनाउँछ र भन्छ, “प्रभु येशूमा विश्‍वास गर अनि तिमीले शान्ति पाउनेछौ।” अनभिज्ञ भए पनि, तिनीहरूले अत्यन्तै प्राकृतिक परिस्‍थितिमा परमेश्‍वरलाई विश्‍वास गर्न पुग्छन्, के यो एक प्रकारको परिस्‍थिति होइन र? अनि तिनीहरूको परिवारमा शान्ति छैन भन्‍ने तथ्य परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको अनुग्रह नै होइन र? अन्य कारणहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न पुग्‍ने कतिपय मानिसहरू पनि छन्। विश्‍वास गर्ने फरक-फरक कारणहरू र फरक-फरक तरिकाहरू छन्, तर तँलाई जुनसुकै कारणले उहाँमा विश्‍वास गर्ने तुल्याए पनि, यो सबै परमेश्‍वरले नै मिलाउनुभएको र मार्गनिर्देश गर्नुभएको हो। सबभन्दा पहिले, परमेश्‍वरले तँलाई चुन्‍नको लागि र तँलाई उहाँको परिवारमा ल्याउनको लागि विभिन्‍न तरिकाहरू अपनाउनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिलाई परमेश्‍वरले दिनुहुने अनुग्रह यही नै हो।